ngu admin ku 20-07-08
IShenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd yasungulwa ngonyaka ka-2011. Yibhizinisi eliphezulu lobuchwepheshe elisebenza ngeR & D, ukukhiqiza nokuthengisa amabhethri e-lithiamu. Okwamanje inama-unit amathathu webhizinisi: i-lithium yebhethri yokukhiqiza amaseli, ukuhlukaniswa komkhiqizo, kanye nomkhiqizo wayo i-SOSLLI. The main p ...
Isiko lenkampani ye-SOSLLI
umbono wenhlangano uSuo Sili ukhula kahle futhi ube ibhizinisi elineminyaka eyikhulu! Umsebenzi wethu Ukuba yibhizinisi lamandla elisha lomhlaba wonke ngobuchwepheshe obuholayo, ikhwalithi enhle kakhulu, ubuciko kanye nokusebenza kahle, kanye nensiza yeklasi lokuqala! ukubaluleka kwenhliziyo Kukhuthele, ubuqotho, ukuqamba kanye nokusebenza kahle, i -...
I-SOSLLI ingena emkhakheni wemibhoshongo yesiteshi sokuxhumana
Kusukela ekuqaleni kwalo nyaka, uSuosili ubike impumelelo emkhakheni wokugcinwa kwamandla. Ngemuva kokusayinwa kwama-oda wokugcina amandla amakhulu wokugcinwa kwamandla ngeZhongshan Lubo neZhongshang Intelligent, muva nje, iSuosili neChina Tower Co, Ltd. (ngemuva kwalokhu kubizwa ngeChina China) Si ...
I-Power Lithium Battery Pack, Ibhethri Lithium Lamandla, Amaseli ebhethri weLithium Ion, Iphakethe lebhethri lamandla, Ibhethri le-3.6v Lithium-Ion, I-20ah Lithium Ion Ibhethri,